Ny Google Pixel miloko "Tena Blue" dia tsy ho hita any Etazonia | Vaovao momba ny gadget
Ny Google Pixel miloko "Tena Blue" dia tsy ho hita any Etazonia ihany
Ny vaovao Google Pixel manohy manome be dia be ny resaka eran'izao tontolo izao ary amin'ny ora farany dia ataony izany noho ny lokony. Araka ny efa fantatrareo, ny fitaovana finday Google vaovao dia hamely ny tsena amin'ny kinova roa samy hafa, miankina amin'ny haben'ny efijery sy amin'ny loko telo samy hafa; Esory ny mainty (zavatra mainty), Volafotsy be (tena volafotsy) ary Tena Manga (manga manga tokoa).
Tamin'ny voalohany dia nambara fa ny loko manga na ny Tena Manga dia ho irery ary amidy any Etazonia ihany, zavatra nampalahelo ny mpampiasa maro satria io no loko manintona ny saina indrindra ary mahaliana kokoa, noho izany tsy mitovy amin'izany.
Na izany aza, androany dia afaka nanamafy izany izahay Ny Google Pixel amin'ity loko manga tsy manam-paharoa ity dia hahatratra firenena hafa amin'ny antsasaky izao tontolo izao, na dia amina amina vondrona maromaro aza. Ary i Google dia te-hanamafy ihany koa fa fanontana manokana ho an'i Etazonia izy io, fa hiampita ny sisintanin'ny firenena Amerika Avaratra koa.
Vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa maro izay efa maniry hahalala hoe rahoviana izy ireo no afaka mividy Google Pixel ary iza mazava ho azy no maniry izany amin'ny loko manga tokoa. Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry foana isika hahafantatra hoe rahoviana no misy eny an-tsena ireo finday avo lenta an'ny mpikaroka.
Inona no loko tiana indrindra amin'ireo telo izay ahitan'ny Google Pixels vaovao?. Lazao anay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay ary manantena ny hiresaka momba an'io sy ireo lohahevitra maro hafa miaraka aminao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Google Pixel miloko "Tena Blue" dia tsy ho hita any Etazonia ihany
Google Pixel, ilay fitaovana izay tian'ny rehetra, fa tsy hisy hividy
Boeing no ho tonga voalohany any Mars